Mill Mill Corn
CTCM-series Compact Corn Mill, afaka manodina katsaka / katsaka, sorghum, soja, varimbazaha ary fitaovana hafa. Ity CTCM-series Compact Corn Mill ity dia mandray ny fampiakarana herin'ny rivotra, ny fitotoana fikosoham-bary, atambatra miaraka amin'ny fanasivanana miaraka, ka hahazo ny fahaizan'ny famokarana avo lenta, ny fibatana vovoka tsara, ny vovoka manidina, ny fanjifana herinaratra ambany, mora fikojakojana ary asa tsara hafa
Vary vita amin'ny lafarinina vita amin'ny varimbazaha
Ny kojakoja fanaovana lafarinina vita amin'ny koba vita amin'ny farine ho an'ny zavamaniry iray manontolo dia namboarina sy napetraka miaraka amin'ny fanohanan'ny rafitra vy. Ny rafitra fanohanana lehibe dia vita amin'ny ambaratonga telo: ny milina fitotoana dia miorina amin'ny tany ambany, apetraka eo amin'ny rihana voalohany ny sivana, ny cyclones sy ny fantsom-pandrefesana pneumatika dia amin'ny rihana faharoa.
Ny fitaovana avy amin'ny milina fitotoana dia alaina amin'ny alàlan'ny rafitra famindrana pneumatika. Ny fantsona mihidy dia ampiasaina amin'ny rivotra sy ny vovoka. Somary ambany ny haavon'ny atrikasa hampihenana ny fampiasam-bolan'ny mpanjifa. Ny teknolojia fikosoham-bary dia azo ahitsy mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny rafitra fanaraha-maso PLC azo atao dia afaka mahatsapa ny fanaraha-maso afovoany amin'ny alàlan'ny automatisation avo lenta ary hahatonga ny fandidiana ho mora sy malefaka kokoa. Ny rivotra mifono rivotra dia afaka misoroka ny vovoka mba hitazomana ny fahadiovana. Ny fikosoham-bary manontolo dia azo apetraka amin'ny trano fitehirizana ary ny endriny dia azo amboarina araka ny fepetra takiana samihafa.
Fonosana lafarinina varimbazaha lehibe
Ireo milina ireo dia napetraka indrindra amin'ny tranobe vita amin'ny beton na zavamaniry mirindra vy, izay 5 ka hatramin'ny 6 no haavony amin'ny ankapobeny (ao anatin'izany ny silo varimbazaha, trano fitehirizana lafarinina, ary trano fampifangaroana lafarinina).
Ny vahaolana fikosoham-bary ataontsika dia natao indrindra araka ny varimbazaha amerikana sy ny varimbazaha fotsy fotsy aostralianina. Rehefa manamboatra karazana varimbazaha tokana dia 76-79% ny tahan'ny fitrandrahana lafarinina, raha 0,54-0,62% ny lavenona. Raha karazana lafarinina roa no vokarina, ny tahan'ny fitrandrahana lafarinina sy ny atin'ny lavenona dia 45-50% ary 0.42-0.54% ho an'ny F1 sy 25-28% ary 0.62-0.65% ho an'ny F2. Manokana, ny kajy dia miorina amin'ny fototry ny maina zavatra. Ny fanjifana herinaratra amin'ny famokarana lafarinina iray taonina dia tsy mihoatra ny 65KWh amin'ny fepetra mahazatra.
Ampiasaina be amin'ny toeram-pambolena, fikosoham-bary, fivarotana serealy ary toerana fanodinana voa hafa.
Izy io dia ampiasaina hanalana ny loto maloto toy ny akofa, vovoka sy ny hafa, loto maloto toy ny fasika, masomboly ahitra kely, voamadinika madinidinika ary loto maloto toy ny mololo, hazo, vato, sns.
Ity mpampisaraka vibro avo lenta ity, miaraka amin'ny fantsom-pandrenesana na ny rafitra faniriana fanodinana dia be mpampiasa amin'ny farine sy ny silo.
Ny efijery rotary fiaramanidina dia ampiasaina amin'ny fanadiovana na fanoratana akora akora amin'ny fikosoham-bary, famahanana, fikosoham-bary, indostria simika ary indostrian'ny fitrandrahana solika. Amin'ny alàlan'ny fanoloana meshes sieves isan-karazany, dia afaka manadio ny loto amin'ny varimbazaha, katsaka, vary, voan-menaka ary akora granular hafa.
Mivelatra ny efijery ary avy eo be ny mikoriana, avo ny fahombiazan'ny fanadiovana, mihetsika ny fihodinan'ny fihodinana ary misy tabataba ambany. Miaraka amin'ny fantsom-paniriana, manao tontolo iainana madio izy io.
TCXT Series tubular Magnet ho an'ny fanadiovana varimbazaha, hanalana ny fahalotoan'ny vy.
Ny andriambaton'ny vatomainty vatasarihana fitokisana dia vita amin'ny fitaovana avo lenta tsy fahita eto an-tany. Ka ity fitaovana ity dia milina fanalana vy lehibe ho an'ny indostria toy ny sakafo, fanafody, elektronika, seramika, simika, sns.
Ity milina ity dia ampiasaina eo an-tampon'ny silo ho an'ny fanesorana vovoka sy ny habetsahan'ny rivotra kely tokana fanesorana vovoka. Ampiasaina betsaka amin'ny fikosoham-bary, trano fitehirizana ary fitoeram-bary masaka.
Fitaovana fikosoham-bary-TSYZ Series pressure dampener dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana ny hamandoana varimbazaha mandritra ny dingan'ny fanadiovana varimbazaha ao amin'ny fararano.